1 Tantara 3 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
1 Tantara 3:1-24
3 Ary ireto avy ny zanakalahin’i Davida+ izay naterany tany Hebrona:+ Ny lahimatoa, Amnona+ zanak’i Ahinoama+ Jezirelita;+ ny faharoa, Daniela zanak’i Abigaila+ Karmelita;+ 2 ny fahatelo, Absaloma+ zanak’i Maka,+ zanakavavin’i Talmay+ mpanjakan’i Gesora;+ ny fahefatra, Adonia+ zanak’i Hagita;+ 3 ny fahadimy, Sefatia zanak’i Abitala;+ ary ny fahenina, Jitreama zanak’i Egla+ vadiny. 4 Enina no naterany tany Hebrona. Ary nanjaka tany fito taona sy enim-bolana izy. Ary telo amby telopolo taona kosa no nanjakany tany Jerosalema.+ 5 Ary ireto avy no naterany tany Jerosalema:+ Simea+ sy Sobaba+ sy Natana+ ary Solomona,+ ka ireo efatra ireo no naterak’i Batseba+ zanakavavin’i Amiela,+ 6 ary koa Jibara,+ Elisama,+ Elifeleta,+ 7 Noga, Nafega, Jafia,+ 8 Elisama,+ Eliada, ary Elifeleta:+ Sivy kosa ireo. 9 Izy rehetra ireo no zanakalahin’i Davida, ankoatra an’ireo zanaky ny vadikeliny. Ary i Tamara+ no anabavin’izy ireo. 10 Ary i Solomona niteraka an’i Rehoboama;+ Rehoboama niteraka an’i Abia;+ Abia niteraka an’i Asa;+ Asa niteraka an’i Josafata;+ 11 Josafata niteraka an’i Jorama;+ Jorama niteraka an’i Ahazia;+ Ahazia niteraka an’i Joasy;+ 12 Joasy niteraka an’i Amazia;+ Amazia niteraka an’i Azaria;+ Azaria niteraka an’i Jotama;+ 13 Jotama niteraka an’i Ahaza;+ Ahaza niteraka an’i Hezekia;+ Hezekia niteraka an’i Manase;+ 14 Manase niteraka an’i Amona;+ ary i Amona niteraka an’i Josia.+ 15 Ary ny zanakalahin’i Josia dia i Johanana no lahimatoa, Joiakima+ no faharoa, Zedekia+ no fahatelo, ary Saloma no fahefatra. 16 Ary i Joiakima niteraka an’i Jekonia,+ ary i Jekonia niteraka an’i Zedekia. 17 Ary ny zanakalahin’i Jekonia tamin’izy voafonja dia i Sealtiela,+ 18 Malkirama, Pedaia, Senazara, Jekamia, Hosama, ary Nedabia. 19 Ary ny zanakalahin’i Pedaia dia i Zerobabela+ sy Simey. Ary ny zanakalahin’i Zerobabela dia i Mesolama sy Hanania, ary i Selomita no anabavin’izy ireo. 20 Ary ny zanany lahy hafa koa dia i Hasoba, Ohela, Berekia, Hasadia, Josaba-heseda, ka dimy ireo. 21 Ary ny zanakalahin’i Hanania dia i Pelatia+ sy Jesaia. Ary ny zanakalahin’i Jesaia dia i Refaia. Ary ny zanakalahin’i Refaia dia i Arnana. Ary ny zanakalahin’i Arnana dia i Obadia. Ary ny zanakalahin’i Obadia dia i Sekania. 22 Ary ny zanakalahin’i Sekania dia i Semaia. Ary ny zanakalahin’i Semaia dia i Hatosy, Jigala, Baria, Nearia, ary Safata, ka enina ireo. 23 Ary ny zanakalahin’i Nearia dia i Elioenay sy Hizkia ary Azrikama, ka telo ireo. 24 Ary ny zanakalahin’i Elioenay dia i Hodavia, Eliasiba, Pelaia, Akoba, Johanana, Delaia, ary Anany, ka fito ireo.
1 Tantara 3